Loza tamin’ny lalam-pirenena faha roa (RN2)
Kamiao roa lehibe nifandona
Nitrangana lozam-pifamoivoizana indray tany amin’ny lalam-pirenena faha roa (RN2), ny alin’ny alakamisy faha 3 ny volana martsa 2016 hifoha zoma teo. Kamiao lehibe roa samy mitondra �conteneur� no nifandona, tany amin’ny tan�na atao hoe Ambohikambana na tetezakambana no afantaran’ny maro azy koa, izay 88 kilometatra hiditra ny tan�nan’i Brickaville avy Antananarivo.
Tsy nisy ny aina nafoy fa iray tamin’ireo mpamily no naratra, naratra teo amin’ny tongony nefa naharitra ora roa no nakana azy tao anatin’ilay fiara.
Niteraka fitohanana teo amin’ireo fiarakodia ity lozam-pifamoivoizana ity, ho an’ireo fiara izay mampiasa ny lalam-pirenena faha 2 iny, hany ka, voatery namorona fiolanana ny fiara kely rehetra fa ireo fiara lehibe kosa dia tsy maintsy niandry ny fanesorana ireto fiara be ireto teo amin’ny arabe vao afaka nanohy ny dian’izy ireo.
Raha araka ny fanadihadina nataonay tamin’ny mpamily fiara be iray izay manao zotra Toamasina - Antananarivo dia raha tokony ho tonga ny zoma maraina tamin’ny 5 ora sy sasany izy ireo dia ny zoma tamin’ny 6 ora ariva vao nigadona tao Ambodivona fiantsonana.
(120) S. Lantomalala : 04-03-2016 - 09:02